Kitra – «Can 2019» : nantsoina i Fabrice fa tsy hilalao i Rinjala sy i Dafé | NewsMada
Kitra – «Can 2019» : nantsoina i Fabrice fa tsy hilalao i Rinjala sy i Dafé
Hanamarika ity faran’ny herinandro ity ny lalao savaranonando miverina eo amin’ny fiadiana ny “Can 2019”, hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy i Sao Tomé-et-Principe. Mpilalao “expats” roa no tsy ho avy, saingy nosoloina iray avy atsy La Réunion.
Hifantoka etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina avokoa ny sain’ny rehetra, rahampitso alahady, hiatrika ny fihaonan’ny Barea de Madagascar sy Sao Tomé-et-Principe, eo amin’ny fiadian-toerana amin’ny “Can 2019”. Efa vonona ny Barea hiatrika izany, izay efa nahazo tombon’isa iray, efatra andro lasa izay, nandritra ny fihaonana natao tany Sao Tomé. Na eo aza izany fandresena azo izany, manana olana ihany ny ekipam-pirenena malagasy satria tsy afaka ny hiatrika ity fihaonana miverina ity i Rinjala, avy any Soisa, sy i Dafé, avy any Frantsa.
Nanapa-kevitra, araka izany, ny mpanazatra mirahalahy, Nicolas Dupuis sy Raux Auguste, fa hanolo azy ireo ka anisan’ny nantsoina Rakotondrabe Fabrice, mpilalao avy atsy amin’ny klioban’ny Ste Marienne, La Réunion. Anisan’ny mpamono baolina be indrindra ao amin’io Nosy rahavavy io i Fabrice, ankehitriny, ka izay ny antony niantsoana azy.
Tsapa mantsy fa tsy ampy famonoam-baolina ny Barea, nandritra iny lalao mandroso iny. Ankoatra izay, tsy hisy fiovana ny firafitr’ireo mpilalao fa ho tonga avokoa ry Paulin sy i Ima ary i Carolus sy i Zotsara, miampy an’i Dada sy i Dabo.
Inoan’ny rehetra fa tsy tokony hampanano sarotra ny Barea ny mbola haka fandresena amin’ny isa mavesatra an’i Sao Tomé, izay toa tsy zatra milalao amin’ny kianja lehibe. Raha ny fandaharam-potoana, ho tonga eto Madagasikara, anio tolakandro amin’ny 3 ora sy fahefany, ry zareo Sao Tomé. Hitsapa avy hatrany ny kianjan’i Mahamasina izy ireo. Manantena ny fanohanan’ny mpijery kosa ireo mpilalaon’ny Barea de Madagascar, rahampitso.